Xasan Shiikh: Dowladdeenu Horumar Dhanka Amaanka ah ayey Sameysay
Madaxweynaha Somalia ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Anadolu in dowladiisu ay horumar ka sameysay dagaalka ka dhanka ah Xarakada Al-shabab.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ciidamada dowladu ay gacanta ku dhigeen meelo badan kuwaas oo horey ay u maamuli jirtay Al-shabab, waxa uu intaas ku daray iney la kaashadeen dagaalka looga soo horjeedo Al-shabaab ciidamada midowga Africa ee AMISOM isagoona tilmaamay in dalka hadda nabadda ay kusii baahayso.
Soomaaliya ayaa u muuqatay Sanadkii tagey mid kasoo reyneysa marka la fiiriyo xasiloonida ay heshay ka dib markii ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka saareen Al-shabaab magaalooyin badan oo ay gacanta ku hayeen.
Si kastaba ha ahaatee Al-shabab ayaa weli ku qaada weeraro ciidamada dowlada iyo nabad illaaliyaasha AMISOM.
Dhinaca kale madaxaweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh ayaa ku tilmaamay booqashadii dhawaan uu ku yimid dalka madaxweynaha Turkiga mid taariiqi ah, wuxuuna sheegay in Turkigu uu yahay saaxiib muhiim ah oo Soomaaliya ay yeelatay isagoo bogaadiyey da’daalada madaxaweynaha Turkigu uu ku doonayo inuu ku caawiyo dadka Soomaaliyeed.
Maamulka Shabeelaha Dhexe oo Baaq u diray Al-shabaab
Maamulka gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa baaq u diray dhalinyarada ka midka ah Al-shabaab, islamarkaana ugu baaqay in ay dhanka dowladda usoo wareegaan.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka amaanka ee gobalkaasi Axmed Meyre Makaraan ayaa sheegay in dhamaan dhalinyarada Al-shabaab ka midka ah ay ugu baaqayaan in dowladda ay kusoo biiraan gaar ahaan maamulka gobalkaasi.
Meyre ayaa sheegay sidoo kale in dhalinyarada ay yihiin laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed kana qeybqaataan horumarka iyo amaanka guud ee dalka.
Waxa uu tilmaamay gudoomiyaha ku xigeenka in maamulka gobalka Shabeelaha dhexe uu diyaar u yahay xilli walba soo dhaweynta dhalinyarada mudada badan Al-shabaabka ka mid ah, islamarkaana ay heli doonaan daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho intaba.
Hadalkaan kasoo yeeray maamulka gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa imaanaya xilliga saraakiil ka mid ahayd Al-shabaab ay dowladda Federaalka isku soo dhiibeen, islamarkaana sidoo kale ay jireen baaqyo dowladda ay dirtay oo ah in dhalinyarada ay Al-shabaab isaga soo baxaan.
Shir Dib u Heshiisiin ah oo Maanta ka Furmaya Dhuusamareeb
Maanta ayaa lagu wadaa in Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud uu ka Furmo Shir dib u Heshiisiin lagu dhex dhigayo Guud ahaan dadka Gobolka Galgaduud, ka hor dhismaha Maamul ay yeeshaan Gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Warar la Helay ayaa sheegaya in Magaalada ay Shalay iyo Labadii Maalmood ee lasoo Dhaafay ay Gaareen 200 oo Ergo ah, kuwaasi oo Shirkaan ka qeyb gelaya, kana kala yimid qaar ka mid ah Degmooyinka Gobalka Galgaduud.
Odayaal Dhaqameed iyo siyaasiin ayaa u Badan Xubnaha Shirkaan ka Qeyb gelaya, waxaana la sheegay in lagu Heshiisiin doono Dhamaan Beelaha wada dega Gobalka Galgaduud.
Suldaan C/casiis Cumar Beyle oo ka mid ah Waxgaradka Gobalka Galgaduud ayaa sheegay in Shirkaan uu daba socdo Shir Nabadeed horay ay ugu Qabteen Degmada Cadaado.
Xasaasi: Xukuumad Qabyo ah oo Baarlamaanka Hortegeysa
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid ayaa isagoo uu Waqtiga uu Horraan u qabsaday Xirayo waxaa uu Baarlamaanka Maanta Horgeyn doonaa Xubnaha Wasiirro uu soo dhisay oo Qabyo ah.
Xubnaha Wasiirrada ee uu Geynayo ayaa waxaa ay yihiin kaliya Wasiirrada Sare, Waxaase meesha ka Maqnaan doona Xubnihii, Wasiiru Dowleyaal iyo Wasiir Ku xigeeno, kuwaa oo aan Weli lasoo Magacaabin.
Mudaneyaal ka Tirsan Baarlamaanka dalka ayaa waxaa ay Xaqiijiyeen in Xukuumaddu ay tahay mid Kalsoonida Heli Karta Maanta, waxaase kuwo kale ay weli Dhaliilsanyihiin Hab dhismeedka Xukuumadda oo ay ku sheegeen mid aan Wada tashi ku Imaan.
20 Xubnood oo ka Kooban kuwii uu usoo Magacaabay Wasiirrada ayuu Maanta la Shir tegi Doonaa Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid, Xubnaha uu Hortegayana waxaa ku jira kuwo Horay dad ay Xulufo yihiin Xilal u heleen, Hadana aan Wax jago ah Asxaabtoodu helin, taasina waa Caqabad kale oo ka Hor Imaaneysa Xukuumadda.
Maxamed Cumar Dalxa Mudane ka Tirsan Baarlamaanka ayaa Xaqiijiyay in Maanta Baarlamaanka uu Hor Imaanayo
Xasaasi: Wasiiro aan Qibrad Siyaasadeed lahayn, Dal Burbursan & Doorashada 2016
Gole Cusub oo ka kooban Wasiiro ku cusub Siyaasadda ayaa loo doortay inay dalka gaarsiiyaan Doorasho Qof & Codkiisa ah 2016, iyadoo Rajadaasi ay sii yaraanayso , marka la eego Waqtiga yar ee haray & Xaaladda dalka.
Shaqsiyaad Cusub oo aan lahayn Qibrad Hogaan & Mid Siyaasad ayaa Talada dalka loo dhiibay, waxaana Shacabka Tallaabadaasi uga hadleen Siyaabo kala duwan oo ku aadan in Xukuumadda Cusub ay dalka gaarsiin karto Doorasho 2016.
Qaarkood waa Dad Leh Taariikh Madow oo ay kabuuxdo Musuq-Maasuq & Maamul Xumo, waxaana keenay Odayaal & Siyaasiyiin raba inay wax ku cunaan Jagadooda, iyadoo aan la eegeyn Danta dalka & Dadka.
Aqoon, Qibrad & Amaano, waa astaamaha Hogaanka wanaagsan lagu xusho, balse taasi hadda kama shaqeyso Soomaaliya sababo la xariira in Qabiil kastaa uu rabo in la qanciyo, waajibna ay ku tahay Ra’iisul Wasaaraha inuu aqbalo qof ay Odayaasha uu keenaan.
Saddex ka mid ah Golaha Wasiirada cusub ee RW Cumar C/rashiid, ayaa waxay noqdeen kuwo horey loogu soo jeediyay inay geysteen masuq maasuq.
Si Baarlamaanka looga gudbiyo, Madaxweyne Xasan Sheekh & RW Cumar C/rashiid waxay dejiyeen Qorshe ah inay Liiska hore ee Golaha Wasiiradda ay ka dhigaan Dhalinyaro aan qibrad lahayn, Bilooyin kadibna laga saaro, iyadoo loo maraya Isku-shaandeyn aan badnayn, si Boosaska loogu baneeyo Ragii lahaa ee hadda Baarlamaanku diiday.
Waqtiga Dowladda u haray waa mid aad u yar, waxa laga sugayo waa mid aad u badan, Dadka Hogaanka loo dhiibayna waa Dad Cusub oo aan ku habooneyn in lagu tijaabiyo Dala dhan kastaa ka burburay oo u baahan soo kabasho Deg Deg.
Gobolada qaar waxaa ku sugan Al shabaab, qaar waxaa maamula Maamullo aan xariir fiican kala dhaxeyn Dowladda Federaalka, qaarna waxayba doonayaan inay goostaan, taasi oo Rajada Hiigsiga Doorashada 2016 Mugdi gelinaysa.
XOG: Kedib Geeridii Godane Al-shabaab waxay Noqotay mid is Dhiiba & Mid la qabto
Hogaamiyeyaasha Al-shabaab ayaa tan iyo Markii uu Geeriyooday Hogaamiyihoodii Axmed Cabdi Godane waxaa ay Billaabeen in ay isu dhiibaan DFS Sababta ayaa lagu sheegay Bur-bur ku socda Ururkaas.
Gobolka Gedo Ciidamada DFS ee ku sugan ayaa waxaa Maanta isu dhiibay ilaa 4 ka Tirsan Shabaab, kuwaa oo isugu Jira 3 Dabley Hubeysan ah iyo Hogaamiyihii ay Ilaalinayeen.
Xubnaha Muhiimka ah ee ka Tirsan Ciidamada iyo Hogaamiyeyasha Al-shabaab ee is Dhiibay waxaa ku jira, Sekeriye Ismaaciil, kaasoo Noqday mar ku xigeenka Godane iyo Sarkaal kale oo lagu Magacaabo Maxamed Siciid Attam, ahaana Hogaamiyaha Al-shabaab u Jooga Deegaanada Puntland.
Xubnaha la Qabtay waxaa ka mid ah Xasan Xanafi Xaaji oo ka Tirsanaa Kooxda Shabaab ugu Qaabilsan Dilalka Wariyeyaasha, Saraakiil kale oo Badan ayaa waxaa ay isu Dhiibeen Ciidamada Dowladda, Halka kuwo kalena la qabtay.
Gobollada ugu Badan ee Hoggaamiyeyaasha Shabaabka lagu qabtay ama ay iska Dhiibeen ayaa waxaa ku jira, Gedo, Hiiraan, Labada Shabeelle, Baay, Bakool iyo xadka uu Dalkeenu la Wadaago Kenya oo ay Doonayeen Qaarkood in ay ka Tallaabaan.
Xasan Shiikh oo ka Qeyb Gelaya Shirka Midowga Africa
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo ayaa ka degey garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa, halkaas oo uu kaga qeybgeli doono kulan madaxeedka Midowga Afrika.
Maadaxweynaha oo wafdigiisa ay ku wehliyaan mas’uuliyiin sare oo dowladda ka ayaa shirka Midowga Afrika ka sokow la filayaa inuu kulamo la qaato madaxda Afrika qaarkood, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, iyo diblomaasiyiin kale oo shirka ka qeybgalaya.
Shir madaxeedka Midowga Afrika ee dalka Ethiopia ka dhacayaa ayaa la filayaa in lagu lafaguri doono arrimo badan oo qaaradda khuseeya.
Xog xasaasi ah: Wasiirada cusub ee DF Somalia iyo sida loo kala keensaday
Golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa ka kooban 20 wasiir, oo gebigood ku yimid rabitaanka saddexda mas’uul ee ugu sarreeya dowladda Soomaaliya.
13 ka mid ah wasiirada waxaa keenay Xasan Sheekh iyo kooxdiisa, halka afarna uu la yimid guddoomiyaha baarlamanka Jawaari. Layaabse, ra’iisul wasaarihii soo magacaabay dhammaan 20-ka wasiir, waxaa loo ogolaaday kaliya in 3 uu ku yeesho.
Halkan hoose ka aqriso magacyada wasiirada iyo sida loo kala keensaday.
Magacyada Wasiirrada uu keenay Xasan Sheekh
1 – Axmed Xasan Gaboobe – Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta
2 – Cabdirixhman Maxamed Xuseen – Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka
3 – Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini – Wasaaradda Gaashaandhigga
4 – Cabdisalaan Hadliye Cumar – Wasaaradda Arrimaha Dibadda
5- Fahad Yaasiin Xaji Dahir - Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda
6- Cabdirixman Yusuf Cali Caynte – Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga
7 – Nuur Faarax Xirsi - Wasaaradda Dastuurka
8 – Guuled Xuseen Qaasim - Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta
9 – Siciid Xuseen Ciid - Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa
10 – Xasan Axmed Muudeey - Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha
11 – Sahra Maxamed Cali Samatar – Wasaaradda Haweenka iyo Hormarinta Xuquuqda Aadanaha
12 – Maxamed Mukhtaar Ibrahim – Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda
13 – Cabdirisaaq Cumar Maxamed - Wasaaradda Batroolka, Biyaha iyo Kheyraadka Dabiiciga
FG: Inta badan wasiirada Xasan keensaday waxaa usoo xulay Faarax Sheekh Cabdulqaadir (Ninka leh go’aanka kama dambeysta ah ee dowladda)
Magacyada Wasiirada uu keensaday Jawaari
1 – Maxamed Aadan Ibraahim “Fargeti” – Wasaaradda Maaliyadda
2 – Cali Xasan Cusmaan - Wasaaradda Beeraha
3 – Saalax Sheekh Cusmaan Muuse - Wasaaradda Howlaha Guud iyo Dib-U-Dhiska
4 – Xaawo Xasan Maxamed - Wasaaradda Caafimaadka
Magacyada Wasiirada uu keensaday Cumar Cabdirashiid
1 – Maxamed Cumar Carte - Ra’iisul Wasaare Ku Xigeen ahna Wasiirka Shaqada, Dhalinyarada iyo Sportiga
3 – Cali Axmed Jaamac “Jangali” – Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada
4 – Khadra Bashiir Cali – Wasaaradda Waxbarashada
Daawo: Xasan iyo CC oo xildhibaanada la damacsan qorshe cajiib ah (Video)
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee uu soo dhisey Ra’iisul Wasaare Sharmarke ayaa laga shaki qabaa in Damjadiid ay boosas celis ah u hayaan dhalinyaro iyaga katirsan oo ku beel ah afartii wasiir ee horey ugu sababta ahaa khilaafka Dowladda.
Waxaa laga shaki qabaa in kalsoonida marka lasiiyo ay is casilayaan wasiirada qaar oo afarti wasiir ay soo laaban doono. Hadaba daawo doodda Royal oo lagu falanqeeyey arrimahaas iyo qaar kale oo kaa qarsoon.
Galmudug: Shirka Cadaado waa aayaha Dadka G/Dhexe
Maamulka Gal-mudug ayaa sheegay in shirka Cadaado ka furmi doona uu yahay fursad weyn oo soo martay shacabka ku dhaqan gobalada Mudug iyo Gal-gaduud.
Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka maamulkaasi Maxamed Cabdi Cali oo la Hadlay Wariyeyaasha ayaa sheegay in fursadaan ay la mid tahay canug yar oo dhashay, islamarkaana loo baahan yahay in shacabka ay u istaagaan sidii ay uga faa’ideysan lahaayeen, inta wax loo ogol yahay, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Shacabka wixii dan u ah iyaga ayaa raadsan doona, laakiinse waxaan leeyahay shirka Cadaado waa fursad soo martay shacabka ku dhaqan gobalada Mudug Iyo Gal-gaduud, aan ka faa’ideysanno” ayuu yiri gudoomiye u xigeenka baarlamaanka Gal-mudug.
Sidoo kale waxa uu ku baaqay gudoomiye ku xigeenka in dadka si isku mid ah ay uga Faa’iideystaan Fursadan ay ku heli karaan maamul ay ku mideysan yihiin oo uu ku sheegay in ay tahay midnimo shacabka Gobolada Mudug iyo Galgaduud ay ku helayaan shirka Maamulka Gobolada dhexe ee ka furmaya Magaalada Cadaado.
Mar uu soo hadal qaaday hadal kasoo yeeray maamulka Puntland oo ku aadan in qeyb ka mid ah gobalka Mudug aanu ka arimin doonin maamulkaan lasoo dhisayo ayuu sheegay in shacabka rabitaankooda aanay celin karin siyaasiin uu ku sheegay in dano kale ay leeyihiin.
Qaban qaabada shirka la doonayo in maamul loogu sameeyo gobalada Mudug iyo Gal-gaduud waxaa haatan si xowli ah looga wadaa degmada Cadaado ee gobalka Gal-gaduud.
TOP: Madaxweyne Xasan Sheekh oo si lama filaan ah uga hadlay Shuruudaha adag ee….
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadley istaraatiijiyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ee dhinaca la dagaalanka argagixisada, iyo saameynta barnaamijkani ku leeyahay goosashada xawliga ah ee xubno ka tirsan Al Shabaab uga soo goosanayaan ururkaasi.
Magacyada, Taariikhda, qabiilada iyo kooxaha ay ka tirsan yihiin wasiirada cusub
Waxa ay halkaan idin kugu soo gudbinayaa Magacyadda, xilalka , taariikhaha iyo qabiilada 20-ka Wasiir ee la magacaabay.
1. Maxamed Cumar Carte – Ra’iisul Wasaare Ku Xigeen ahna Wasiirka Shaqada, Dhalinyarada & Sportiga, waa Isaaq, Habar Awal, Sacad Muuse , Nuux Ismaaciil, Reer Gadiid, Sarkaal ka tirsanaa Hay’ada Sirdoonka Mareykanka oo ku jiray Warbixintii Wikileaks.
2. Axmed Xasan Gaboobe – Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta, Waa Dir, Biyo Maal, Gaadsan, wuxuu ka tirsanaa kooxaha Mayalka adag ee Xagjiriinta Somalia, wuxuuna ka mid ahaa Raggii Maxaakiimta Islaamka la baxay ee Koofurta Somalia.
Wasiir Gaboobe wuxuu ka soo qeybgalay dagaaladii Al -Itixaad la galeen Cabdullahi Yuusuf ee Boosaaso ka dhacay, dagaalkii Al Itixaad la galeen Killinka 5aad, waxaa loo yaqaan Ugaas Bile, wuxuuna u ololeeyaa in Somaliland aqoonsi la siiyo.
Wasiir Gaboobe wuxuu degan yahay Hargeysa, waana ninka wada Abaabulka dagaalada Deefoow, Kabxanleey iyo Shabeeladda Hoose, isagoo aaminsan qadiyad ku saleeysan aqoonsiga Somaliland iyo in la helo dhulweyne u gaara beesha Dir. Gaboobe wuxuu qaabilsan yahay Xiriirka Al-Shabaab iyo beelweynta Dir.
3. Cabdiraxman Maxamed Xuseen Odowaa – Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka . Waa Hawiye, Habargidir, Saleebaan, waana Maamulaha Machad-ka Simad ee Madaxweyne Xasan iyo Faarax Cabduqadir leeyihiin, wuxuu ka mid yahay Kaadiriinta Damujadiid, waa nin ka tirsan shaqsiyaadka boobay Hotel-ka SYL Muqdisho, waxaana meesha loo geeyay inuu Cabdi Kariim Xuseen Guuleed Madaxweyne uga dhigo Maamulka goboladda dhexe taas oo aan suurgal noqon doonin sida Xeeldheerayaasha qabaan.
4. Maxamed Aadan Ibraahim “Fargeti” – Wasaaradda Maaliyadda , Waa Raxanweyn, DISOOW, waxaana keensaday Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, mana ahan nin awood u leh inuu maamulo Maaliyadda Somalia.
5. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini – Wasaaradda Gaashaandhigga , Waa Daarood, Mareexaan, Waa Taliyahii hore ee Ciidanka xooga dalka Somalia, waana shaqsi afgaaban laakiin waa nin aad ugu dhaw kooxda Damu-jadiid.
6. Cabdisalaan Hadliye Cumar – Wasaaradda Arrimaha Dibadda , Waa Dir , Gadabuursi, Makaahiil, waa ninkii dhacay hantidii Bankiga dhexe ee Somalia, sidaas darteedna isu casilay, waxaana lagu xasuustaa inuu ku soo baxay Warbixintii UN Monitoring Group.
7. Khadra Bashiir Cali – Wasaaradda Waxbarashada, Waa Daarood, Leelkase, waxeey ku noolaan jirtay Canada, waxeyna leedahay NGO, waxeey saaxiibo yihiin Cumar Cabdirashiid.
8. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir – Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda – Beesha Shanaad, Reer Aw Xasan, Reer Aw Mahdi, wuxuu ka tirsan yahay Kaadiriinta Damujadiid, wuxuu horey u ahaan jiray Wariye ka soo shaqeeyay Telefishinka Al-Jazeera, waxaana la rumeeysan yahay inuu yahay Sarkaal u muhiim ah Sirdoonka Qatar oo ka hoowlgala gudaha Somalia gaar ahaan Muqdisho.
9. Cabdiraxman Yusuf Cali Caynte – Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga, Waa Hawiye, Murusade, waana xubin sare oo ka tirsan Urur diimeedka Aala Sheekh, wuxuu ahaan jiray Wariye ka soo shaqeeyay VOA iyo Aljazeera, wuxuuna Muqdisho ka furtay Machad-ka Heritage.
10. Nuur Faarax Xirsi – Wasaaradda Dastuurka , Waa Isaaq , Habaryoonis, wuxuu ahaa Safiirka Somalia u fadhiya Malaysia. Wuxuu horey u ahaa Gudoomiyaha Urur siyaasadeedkii Gurmad ee Somaliland, waana xubin ka tirsan Urur diimeedka Damujadiid.
11. Guuled Xuseen Qaasim – Wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta, Waa Daarood, Ogaadeen, Maxamed Subeer, Reer Isaaq, waxaa dhalay nin Wasiir ka ahaan jiray Dowladii Maxamed Siyaad Barre oo la dhihi jiray Xuseen Cabduqadir Qaasim, oo ahaa Wasiirkii Batroolka.
12. Cali Axmed Jaamac “Jangali” – Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Waa Daarood, Dhulbahante, wuxuu ahaan jiray Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda xilligii Cabdullahi Yusuf, waana nin lacago badan inuu lunsaday lagu heysto laakiin waxaa keensaday Fahad Yaasiin oo ay isla yihiin reer Nairobi.
13. Siciid Xuseen Ciid – Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta & Daaqa , Waa Meheeri, Carab Saalax.
14. Cali Xasan Cusmaan – Wasaaradda Beeraha, Waa Raxanweyn.
15. Xasan Axmed Muudeey – Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha, Waa Jareerweyne, Shiidle.
16. Saalax Sheekh Cusmaan Muuse – Wasaaradda Howlaha Guud iyo Dib-U-Dhiska, Waa Digil, Gelledi.
17. Sahra Maxamed Cali Samatar Wasaaradda Haweenka iyo Hormarinta Xuquuqda Aadanaha, Waa Tumaal, waxeeyna ka mid aheyd kooxdii Maxamed Cabdullahi Farmaajo ee Xisbiga Tayo. Waxaa dhalay Sareeya Guuto Maxamed Cali Samatar, Madaxweyne ku xigeenkii Kali-Taliska.
18. Maxamed Mukhtaar Ibrahim – Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda, Waa Hawiye, Gaaljecel, wuxuu ka yimid UK.
19. Cabdirisaaq Cumar Maxamed – Wasaaradda Batroolka, Biyaha iyo Kheyraadka Dabiiciga, Waa Hawiye, Xawaadle, waxaana lagu xantaa inuu ka tirsan yahay Urur diimeedka Aala Sheekh.
20. Xaawo Xasan Maxamed – Wasaaradda Caafimaadka, Waa Raxanweyn, Hadamo , waxeey la taliye ka aheyd mashruucii Go to school, waxeeyna ka tagtay dalka Ingiriiska.
Xildhibaanada BF oo diiday qiyaanadii uu soo dejiyey Faarax iyo 30 hor leh oo ku biiray labada Kutlad
Cayaartii Faarax C/qaadir uu soo dejiyey ee loo dhiibay ra’iisul wasaare Cumar ayaa fashilantay ka hor inta aan xittaa garoonka lasoo gelin, kadib markii ay caddaatay qiyaanadii loo degay xildhibaanada baarlamanka.
Faarax C/Qaadir ayaa dhallinyaro kooxda Damu-Jadiid ka tirsan ku safay xilalkii wasiirada xukuumadda cusub, si barlamanka loo marsiiyo kadiba xubnahaas xilalka looga qaado, laguna beddelo rag ay ka mid yihiin isaga iyo Cabdikraiin Guuleed.
Faarax waxaa booskiisa buuxiyey Fahad Yaasiin oo ay isku beel yihiin, isagana uu wax soo baray, halka xilka Guuleed loo sii dhiibay Cabdiraxman Maxamed Xuseen Odowaa oo madax ka ah machadka SIMAD. Wiilkan kasoo jeeda beesha Saleebaan ee Habar-Gidir waxaa gacanta ku haya Xasan, Guuleed iyo Faarax oo leh machadka SIMAD, waxaana qorshuhu yahay in lagu beddelo Guuleed marka xukuumadda la ansixiyo.
Xilka Cabdullaahi Sambaloolshe ee wasaaradda amniga qaranka ayaa laga reebay golaha wasiirada, waxaana la filayaa in gadaal looga soo daro marka la ansixiyo xukuumadda, sida ay Damu-Jadiid iska dhaadhiciyeen.
Si kastaba, cayaartaas ayaa noqon mid lagu qaldi karo xildhibaanada rug-caddaayaasha siyaasadeed ah ee kasoo horjeeda awood maroorsiga Damu-Jadiid ee labada Kutlad.
Xildhibaan la hadlay Shabakada, ayaa xaqiijiyey in maanta ay war cad kasoo saari doonaan dheel-dheesha Villa Somalia, islamarkaana aanay u cuntami doonin wixii ra’iisul wasaare Cumar, oo hadda magac u yaal ah, lagu qasbay.
Xildhibaanka ayaa sheegay inaysan aqbali karin in 15 ka mid ah golaha wasiirada cusub la siiyo kooxda Damu-Jadiid. Shuruudii hore ee xildhibaanada labada Kutlad ayaa waxaa ka mid ahaa in wasiirada loo qeybsado 50-50 marka laga soo tago in 4 wasiir aan meesha lagu soo dari karin.
“Waxaan la yaabanahay caqli xumada nimanka fadhiya Villa Somalia, ee carrurta na mooda” ayuu yiri xildhibaanka.
War kale oo naxdin lehna, 30 xildhibaan oo hor leh ayaa la filayaa inay ku biiraan xildhibaanada kasoo horjeeda kooxda Faarax C/qaadir. Xildhibaanada ayaa ah wasiiradii xukuumadda laga noqday ee xilalkooda iminka waayey, kuwaas oo carro darted durba isku baddalay.
Cayaarta Villa Somalia, ayaan la ogeyn illaa inta ay socon doonto.
Muungaab oo xalay qaabilay masuuliyiin Turki ah (Daawo Sawirada)
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa xalay casho sharaf ugu sameeyay xafiiskiisa Degmada Heliwaa masuuliyiin ka tirsan Hay’adaha Turkiga ee Muqdisho ka howlgala.
Xaflad lagu qabtay xarunta Dowladda hoose ee Degmada Heliwaa, ayaa waxaa ka qaybgalay qaar kamid ah Sii hayayaasha Wasiirada Xukuumadda, Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan Hay’adaha Turkiga ee Muqdishoka howlgala.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo ugu horeyn xafladda hadal ka jeediyay ayaa shaaca ka qaaday in shacabka Soomaaliyeed aysan ilaabi doonin taageerada iyo garab istaaga ay u sameysay Dowladda Turkiga.
“Walaalaha Turkiga waxqabad muuqdo ayay dalka ka fuliyeen, runtii shacabka Soomaaliyeed ma iloobi doonaan abaalka ay noo galeen Walaalaha Turkiga” ayuu yiri Muungaab.
Guddoomiye ku-xigeenka Hay’adda Bisha cas ee dalka Turkiga Nihat Adiguzel oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay sii wadayaan taageerada ay u fidinayaan shacabka Soomaaliyeed, taasi oo qeyb ka ah xoojinta xiriirka labada dal.
Siihayaha Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in booqashada Madaxweynaha Turkiga uu ku yimid dalka ay tahay mid taariikhi ah oo ka turjumeysa Walaaltinimada ka dhexeysa labada dal.
“Waxaan jeclahay in aan aad uga mahadceliyo Guddoomiyaha Gobolka qabsoomidda xafladan, tan kale maanta waxaa qormay taariikh kale oo horleh, Walaalaha Turkiga waxbadan ayay noo qabteen, waana u mahadcelineynaa” ayuu Wasiir Goodax hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay.
Meydka Xildhibaan Xaabsade oo maanta lagu aasaayo Magaalada Baydhabo
Allaha unaxariistee waxaa maanta lagu wadaa in Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay lagu aaso Marxuum Xildhibaan Maxamed Ibraahin (Xaabsade) kaasi oo shalay aroortii ku geeriyooday Magaalada Muqdisho.
Magaalada Baydhabo waxaa ka socota qaban-qaabada loogu jiro aaska Marxuun Xildhibaan Xaabsade, waxaana lagu wadaa in meydkiisa saaka laga qaado Magaalada Muqdisho oo diyaarad gaar ah ay geyso Magaalada Baydhabo.
Sida qorshaha uu ahaa shalay ayaa lagu waday in Meydka Xildhibaan Xaabsade loo qaado Magaalada Baydhabo si loo aaso, hayeeshe shalay waxa ay usuurageli weysay Wafdiga Madaxweynaha dalka Turkiga oo Garoonka Muqdisho kasoo degaayay.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa guddi u xilsaaray qaban-qaabida Aaska Xildhibaan Xaabsade, guddigaasi oo hada ku sugan Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolkaasi.
Guriga uu ku leeyahay Magaalada Baydhabo Marxuum Xildhibaan Xaabsade ayaa waxaa buuxdhaafiyay dad badan oo eheladiisa iyo qaar kamid ah shacabka Magaalada Baydhabo oo doonaayo inay ka qaybagalaan aaska Marxuumka loo sameynaayo.
Marxuum Xildhibaan Xaabsade ayaa saameyn ku lahaa dadka kasoo jeeda Gobolada Baay iyo Bakool, maadaama uu kamid ahaa xubnihii la odhan jiray RRA ee Baay iyo Bakool ku sugnaan jiray.
Marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun habeen hore maqribkii kusoo booday oo loo seexiyay Isbitaalka Deva ee Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya XASAN Sh. Maxamuud oo faallo xiiso badan qoray
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa faallo muhiim ah ka qoray kaalinta Turkiga ee Soomaaliya. Faalada uu madaxweyne Xasan Sheekh usoo diray alldhacdo hoos ka aqriso.
Kaalinta Turkiga ee Soomaaliya: Taageerada Niyadsami leh ee Waqtiga Adag
Waxay Soomaaliya ka soo kabanaysaa hadimooyinkii gaaray. Ciidamada Qalabka sida ee Soomaliyana, waxay si wadajir ah ula hawlgalayaan kuwa midowga Afrika, iyagoo dib-u-hantay inta badan xarumaha dadweynaha Soomaaliyeed iyo kaabayaasha muhiimka ah oy ka mid yihiin; dekadda Barawe, islamarkaana uu horumar lixaad leh ku tallaabsanayo qaab-dhismeedka dawladdeenna muddo kooban marka la eego awoodda iyo fulintooda, si loo xaqiijyo ‘higsiga ‘qorshaha ee 2016’– sannakaas oo aynu qaban doonno doorashooyin guud.– taasoo aynu si dhab ah u xaqiijin doono.
Mid ka mid ah arrimaha aan soo xusayna suuragal ma noqoteen, hadddii aanan taageero iyo kaalmo deeqsinimo leh ka helin beesha caalamka, gaar ahaan dalka Turkiga – iyo madaxweynihiisa–isagoo tusaale waafi ah u noqon kara kaalinta wax-ku-oolka ah ee ay ka qaateen dib-u-soo-kabashada dalka.
Waxay Dawladda Turkigu soo bandhigtay horumar baahsan oo dhinacyo badan taabanaya, iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaliyeed fursad u siisay inay ka wada faa’iidaystaan wax qabadka ku salaysan ajendada lahaanshaha bulshada, taasoo sare u qaadday dareenka shacbiga, kalsoonida iyo niyadsamida ay u hayaan taageeradooda joogtada ah. Wuxuuna Turkigu si buuxda isu waafajiyey baahida jirta, isagoo isku-dhafaya dadaallo kala duwan oo ku wejahan hab-raacyada taabbagelinta horumarinta ee ay ka mid yihiin; gargaarka bini’aadminnimada, horumarinta mashaariicda iyo hirgelinta maalgashiga dalka..
Dawladda Turkigu, waxay kaloo xaqiijisay in taababgelinta iyo joogtaynta horumarintu aysan ahayn oo keliya awaaiir dibadda laga soo waariday, baahida ka tarjumaysa jaran-jarada siyaasadda, taasoo marna talaabo la qaadayo. Balse hawlgalka Turkigu, waa mawjad mashaariic ah oo mar keliya la wada hirgelinayo, waxayna ku dhisan tahay awood dabiici ah, iyadoo safka hore ay hawlgalladaas kaga jiraan dadweynaha Soomaaliyeed. Wuxuu Turkigu maalgeliyey kaabayaasha dhaqaalaha, dhismayaasha cisbitaallada, dib-u-dhiska dhismayaasha hantida dawladda iyo qodista ceelasha.
Waxay tababarro u fidiyeen Dhakhaatiirteenna, macallimiinta iyo shaqaalaha rayidka ah. Waxay Turkigu deeqo waxbarasho u fidiyeen in ka badan 1,000 arday, iyadgoo fursad u siiyey inay ubadkennu dibadaha aqoon dheeraad ah ka soo qaataan.. waxay dalka soo galiyeen ganacsi is-beddelo lixaad leh ku sameeyey muuqaalka magaalada Mogadishu, islamarkaana ku dhiirregeliyey inay shirkado fara badan dalka yimaadaan, ayna is-bedel ku sameeyaan maalgashiga iyo mashaariicda wax-soo-saarka dalka, ayna ka mid yihiin; soo celinta adeegyada dekedda iyo garoonka diyaaradaha oo sare u qaadday dakhliga iyo dhaqaalaha dalka. Maanta, imaatinka rakaabka la socda shirkadda Turkish Airlines’ ee hawada sare ee Mogadishu ka soo degaysa, waxay si joogto ah inoo xusuusinaysaa xasiloonida sii kordhaysa iyo kalsoonida aynu ku qabno taageerada deeqsinnimada leh ee Turkigu noo fidinayo.
Marna Turkigu lama sugayaan maalgelinta taageeradooda ilaa inta xasilooni buuxda uu dalku ka gaarayo, waxayna maalkooda u hurayaan sidii uu dalku horumar taam ah ku xaqiijin lahaa. Halka maalgeliyayaasha kale ee caalamiga ahi ay qorshohooda ka hirgaliyaan meelo kale oo dunida ka mid ah, waxayna Turkigu dadkooda u soo diraan gudaha Soomaaliya , iyagoo sare u qaadaya xaddiga ugu sarreeya ee khibradda iyo dhaqaalaha maalgelinta ku habboon. Hay’adaha gargaarka ee dalka Turkigu, waxay si toos ah taageero u gaarsiiyaan dadka tabaalaysan, si ay u kordhiyaan saamaynta waxtarka leh ee ay adeegyadaasi u leeyihiin. Waxanan tusaale u soo qaadan karnaa Tababarrada ay ka fuliyaan cisbitaallada magaalada Mogadishu, wuxuuna Turkigu ku qalabeeyey cisbitaalka 400-sariirood, iyagoo tabbabaro xiriir ah ay u fudinaya dhakhaatiirta Maggaalada Mogadishu ka hawlgala, si sare loogu qaado khibraddooda dhinaca gargaarka caafimaadka ee ay bukaannadu u baahan yihiin. Tallaabooyinkani waxay daah-fureen in hay’adaha horumarinta Turkigu ay ku sifoobaan la hawl-galayasha ugu haboon ee si siman ula shaqeeya hay’adaha dawladda, bulshada maxaliga ah iyo ganacsatadaba.
Isku soo wada duuboo, madaxweynaha dawladda Turkiga Muadane Recep Tayyip Erdogan, wuxuu kaalin hormuudnimo ka qaatay hawlgalkaas.
Laga soo bilaabo ilaa horraantii sannadkii 2011-kii isagoo xilligaas ahaa ra’iisul wasaare, ayaa waxa uu booqasho ku yimid dalka Soomaaliya– isagoo noqday mas’uulkii ugu sarreeyey ee darajadiisoo kale gaaray oo cagta soo dhiga dalkeenna in ka badan 200! Isaga ayaana indhaha caalamka ku soo jeediyey, wuxuuna shucladda u qaaday baaqii caalamiga ahaa ee sida tooska ah uu ugu soo bandhigay beesha caakamku inay wadajir ahaan uga qayb qaadato dib-u-dhalashada iyo horumarinta dalka Soomaaliya.
Laga soo bilaabo dib-u-curashadaas, Turkigu wuxuu Soomaaliya ula dhaqmayey la-hawl-gale isku-dheellitiran, isagoo xurmaynayey codsiyadii kala duwanaa iyo mudnaan-siinta barnaamijyada dib-u-soo-kabashada ee ay Soomaalidu soo jeediyeen. Waxay Aragtida dawladda Turkiga ku salaysan tahay hadaf ku wejahan Mustaqbalka Soomaaliya ee dhinacyada la-hawlgalka ganacsiga, fursad siinta tallabooyinka horumarinta, isku-dheellitirka xiriirrada waafaqsan is-qadarinta, iyo iskaashi yiddidiilo leh. Kaalinta Turkiga ee dhinacyada horumarinta iyo xasilinta dalka Soomaaliya, waxay astaan muhiim ah u tahay hab-raaca Taageerada Niyadsamida leh ee Waqtiga Adag ee uu dalku imminka marayo, annagoo si weyn u rajaynayna inaynu saaxiibtinnimo waarta ay na dhex mari doonto xilliga barwaaqada ah ee mustaqbalka nagu soo foolleh.
W/Q: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud
Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo gacanta ugu jira kooxda Al-Shabab
Wararka laga helaayo dhanka Saraakiisha Ciidamada Maamulka Puntland ayaa sheegaya in Maleeshiyaadka Alshabaab ee ku sugan Buuraha galgala ay gacanta ku dhigeen tiro ka tirsan Ciidamada Maamulka.
Sargaal magaciisa kusoo gaabiyay Food kana mid ahaa Saraakiishii la socday Ciidamada Puntland ee duulaanka ku qaaday Galgala, ayaa xaqiijiyey in halkaasi looga qafaashay ilaa 9-ka tirsanaa Ciidamada Maamulka gaar ahaan kuwa Militeriga.
Waxa uu sheegay in Ciidamadaasi ay ku la’ yihiin nolol iyo geeri, balse markii ugu dambeysay ay jiida hore uga sugnaayen Buuraha Galgala.
Sidoo kale, waxa uu carabka ku dhuftay in wakhtigii dambe ay heleen xog ku aadan in Ciidamadaasi ay gacanta ugu jiraan Maleeshiyaadka Alshabaab ee ka dagaalanta Buuraha galgala.
Saraakiisha Ciidamada Militeriga Maamulka Puntland oo maalmahaani weeraro joogta ah ku hayay goobaha ay Maleeshiyadu kaga sugan tahay Buuraha, ayaa waxa ay wadaan dadaalo ay kusoo furanayaan Ciidamadooda ee ku jira gacanta Alshabaab.
R/W CCC oo isaga un is fashilinaaya
Xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahim oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somalia, ayaa Ra’iisal Wasaaraha ugu baaqay haddii uu doonaayo in Xukuumadiisu ay shaqeyso, inaanu Xukuumadiisu kusoo darin dhamaan wasiiradii la soo shaqeeyay Shirdoon iyo Cabdi weli sheekh axmed.
Waxa uu sheegay in Ra’isul wasaare Cumar Cabdirashiid uu isaga fashilin karo Xukuumadiisa, islamarkaana uu isagu najixin karo, waa haddii uu yiri uu ka waantoobo misna ka fogaado shaqsiyaadka aan maslaxada dalka marnaba ka shaqeyn, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale, waxa uu farta ku goday in go’aankooda uusan aheyn mid u baahan in Xildhibaano leysu raadiyo, balse uu yahay mid go’an oo ay ku hor istaagi doonaan Xukuumada soo socta.
Mas’uuliyiin ay kamid yihiin wasiiro hore iyo Xildhibaano marar badan isku noq noqday si ay go’aan kaga gaaraan arrinta Golaha Wasiirada, ayaa waxaa la soo sheegayaa inaanay ka soo bixin natiijo miro dhal ah.
Dhanka kale, Natiijo la’aantaasi ayaa waxa ay ka turjumeysaa heerka uu gaarsiisan yahay Is fahan’waaga Siyaasadeed ee u dhexeeya Madaxda sare iyo Golaha Baarlamaanka.
Maxaad kala socotaa qaab dhismeedka baarlamaanka Jubbaland iyo tirada?
Qorshaha Baarlamaanka Jubaland ayaa taariikhdu markii ahayd 20/01/2015 ri rasmi ah loo furay iyadoo kulankaas daahfurka ah ay goobjoog ka haayeen wakiilo ka socday beesha caalamka iyo dowlada dhexe ee Somalia, hadaba wajhti intee dhan ayuu socon doonaa qorshaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubaland?Qorshahan wuxuu socon doonaa muda bil ah laga soo bilaabo maalintii la daahfuray waxaana mudadaas Bisha ah qorshaysan in la qabto dhowr arimood oo is xigxiga kuwaas oo qaar qabsoomeen qaarna ay wali dhiman yihiin.
2) In golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland iyo wakiilada IGAD ka arinsadaan qaabka ugu haboon ee loo guda galayo dhismaha baarlamaanka Jubaland
Dowladaha Somaliya iyo Turkiga oo kala saxiixanaaya heshiis cusub
Dalalka Somaliya iyo Turkiga, ayaa waxaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiis cusub, oo noqon doono wejigiisii labaad, iyadoo Dowladda Somaliya ay si weyn u soo dhaweysay.
Labada dalka, ayaa waxay horey u kala saxiixdeen heshiis ku saabsan arrimaha caafimaadka, waxbarasho iyo dib u dhiska dalka, si markaasi loo soo celiyo rajadii shacabka Somaliyeed ka qabeen, bal in ay degto xaalada wadanka.
Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka Somaliya, ayaa daboolka ka qaaday in labada dhinac ay saacadaha soo socdo kala saxiixan doonaan heshiiska wejigiisii labaad.
Heshiiskaan cusub, ayaa noqon doono mid ku saleysan arrimaha dhaqaalaha, gargaarka iyo ammaanka, iyadoo Dowladda Turkiga ay markaan gacan ka geysan doonto xasiloonida Somaliya.
Ra’iisal Wasaare Cumar, ayaa heshiiskaan cusub ku sheegay mid macno badan leh, waxaana lagu wadaa in uu ka qabsoomo Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Madaxweynaha Turkiuga Recep Tayyip Erdogan, ayaa waxaa goor dhow la filayaa in loo galbiyo Xarunta Madaxtooyada Magaalada Muqdisho, si uu halkaasi uu kulan ugula qaato Madaxda Dowladda Somaliya.
Ra’iisal Wasaaraha oo la hadlay Radio Muqdisho, ayaa waxa uu Turkigu ku ammaanay mid ay ka go’an tahay in taageero sax ah uu siiyo bulshada Somaliyeed.
Laamaha ammaanka oo fariin udiray da’yarta Shabaab ka bar-bar dagaalamaysa
Laamaha ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa fariin udiray dhalinyarada ku jira Ururka Al Shabaab ee kasoo horjeeda ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ee dalka ku sugan.
Afhayeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble, ayaa sheegay in fariin wanaagsan uu u diraayo dhalinyarada caadeysatay inay u dagaalamaan Ururka Al Shabaab ee kasoo horjeedo qaranka Soomaaliya sida uu yiri.
Qaasim Axmed Rooble ayaa dhalinyarada Shabaab ka tirsan wuxuu usheegay inay kasoo baxaan Shabaab oo dhinaca dowladda ay kusoo biiraan, isaga oo sheegay in Dowladda Soomaaliya ay dejisay qorshe xubnaha Shabaabka kasoo baxa si wanaagsan loogu soo dhaweynaayo.
“Dhalinyarada waan soo dhaweyneynaa, xitaa waxaan soo dhaweyneynaa midkii horay dambiilaha u ahaa, taliyaasha aniga oo afkooda ku hadlayo amarka ay isiiyeen halkaan ka jeedinaya soo dhawoow, kasoo noqo wixii aad horay u haleysay, wixii dambi ah aad horay u gashay kasoo noqo, soo gal oo imaaw, nidaamkii laguu dejiyay iyo nidaamkii qolooyinkaasi loo dejiyay ayaad mareysaa, waa lagu hagaajinayaa, waxbaad baraneysaa, aadbaa laguu soo dhaweynayaa, dhalinyarada qaabkaasi ku jirta waxaa loo soo dhaweynayaa sida ugu mudan” Ayuu yiri Qaasim Axmed Rooble.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowr mar baaqyo kala duwan ujeedisay xubnaha ka tirsan Ururka Al Shabaab, inkastoo baaqaasi ay qaateen Shabaab badan oo dhinaca dowladda kusoo biiray.
Xubnaha Shabaab ee dhanka dowladda usoo goosta, ayaa muddo markii la dhaqanceliyo kadib waxaa lagu biiriyaa ciidamada dowladda si ay uhowlgalaan oo Shabaabka ay yaqaaniin ay usoo sheegaan.
Al Shabaab ayaa tan iyo markii la dilay Hogaamiyahoodii Axmed Godane, waxaa ku yimid fashil siyaasadeed iyo mid awoodeed.
XOG: Faarax C/qaadir oo shuruud lagu xiray in uu Wasiirnimo ku soo laabto!!
Iyadoo dhawaan R/wasaaraha DF Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke uu sheegay in uu dib u eegis ku sameenaayo xukuumadii uu dhawaan soo dhisay ayaa wali waxaa jira xubno doonaayo Wasiirnimo balse shuruud loogu xiray Wasiirnimadiisa.
Farax C/qaadir oo doonaayo in mar kale loo magacaabo Wasiirka Cadaalada ayaa waxa lagu xiray in uu keensado magacayo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo doonaayo in isaga laga dhigo Wasiir isla markaana ay soo saxiixaan warqad ay magacayadooda ku qoran yihiin.
R/wasaare Cumar ayaa ku wargaliyay Faarax in looga baahan yahay in ugu yaraan uu la yimaado 50 Xildhibaan kuwaas oo isku waafaqsan in isaga loo soo celiyo Wasiirnimadiisa isla markaana iyaga ay codsiin doonaan.
Farax C/qaadir ayaa hadda wada qorshe uu ku soo aruursanaayo Xildhibaanadaas waxaana la sheegay in uu diyaar la yahay lacag badan ,waxaana arinkaas ay iska kaashanaayaan C/kariim Guuleed oo beeshiisa kalsooni ka hesyto balse isagana Xildhibaano kale raadsanaya.
Ugu danbeyntii shukaansiga Xildhibaanada ayaa wali waxa ay ka soconayaan magaalada Muqdisho iyadoo shuruudaha Wasiir noqoshada ay ku xiran tahay hadba Xildhibaanada ku taageersan.
Beesha Xawaadle oo niyad jab ku riday Goodax Barre
Warar hoose oo naga soo gaaraya dhanka Siyaasiyiinta Beesha Xawaadle, ayaa sheegaya in Sii haayaha Wasaarada Arrimaha Gudaha Xukuumada Somalia C/llahi Goodax Barre uu niyad jab kala kulmay Odayaasha Beesha.
Mid kamid ah Siyaasiyiinta oo sababa jira awgeed uga gaabsaday magaciisa, ayaa sheegay in ku dhawaad Seddex kulan oo dhexmaray Goodax Barre iyo Odayaasha uu kusoo idlaaday Fashil kadib markii ay ku gacanseeren inuu u matalo xilka Beesha ee Xukuumada Cusub.
Sidoo kale, Siyaasiga ayaa sheegay in Odayaasha Beesha ay wataan ilaa Laba ruux oo ay qorsheeyen inay u matalaan Xukuumada, sidaa awgeedna uu qadka uga baxay C/lahi Goodax.
Kulan Afar asbuuc ka hor dhexmaray Madaxweyne Xassan iyo Odayaasha ayaa waxa ay isla go’aamiyeen in Odayaasha ay la imaadan shaqsiga u matali lahaa Xukuumada Cusub, waana tan keentay in C/llahi Goodax Barre uu ku waayo rajadii uu ka lahaa Xukuumada cusub.
Lama Oga shaqsiyaadka ay kala yihiin labada Siyaasi oo ay wataan Odayaasha inkastoo midi loo badinaayo inuu yahay Sambaloolshe oo ay caqabad ka heysato dhanka BF.
Jurille “Puntland ayadaba uma qorna W/Mudug, reer Konfurna kuma qasbana Koonfurta MUDUG
Xildhibaan Cabdirisaaq Xasan Cismaan Jurille ayaa si cajiib ah oo maskax iyo xikmad ku jirto uga hadlay muranka ka taagan gobolka Mudug ee maamulka Puntland uu billaabay kadib markii lagu dhowaaqay in maamul loo dhisayo gobollada Gal-Gaduud iyo Mudug.
Jurille waxa uu sheegay in xaqiiqda ay tahay in 5-ta degmo ee gobolka Mudug ay laba ka mid ah (Hobyo iyo Xarar-dheere) xigaan dhinaca Koonfur, halka labana ay maamusho Puntland (Goldogob iyo Jariiban), ayada oo magaalada Gaalkacyo-ana loo degan yahay qeyb iyo qeyb.
“Puntland dastuurkeeda kuma qoran waqooyiga Mudug ee waxaa ugu qoran Mudug, sidaa darted haddii dadka gobollada dhexe ayagana ay ku qortaan Gobolka Mudug xaq bey u lee yihiin, lagumana qasbi karo inay ku qoraan Koonfurta Mudug, sababta oo ah Punlanad- ayadaba cid kuma qasbin inay qoroto Mudug” ayuu yiri Jurille.
Waxa uu intaas ku daray in xiisadda ka taagan arrintaas ay tahay mid la abuuray oo xaqiiqda jirta iska indha tireysa, islamarkaana aysan jirin cid gobolka Mudug degta oo loo diidi kara inay sheegato, balse ay iminka ka shaqeynayaan sidii arrinta xal loogu dhameyn lahaa.
CCC oo la kulmay Beesha Habar-Gidir
Xubno ka tirsan BF Somalia, ayaa xaqiijiyay in Ra’isul wasaaraha dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu kulan la qaatay qaar kamid ah Odayaasha Beesha HabarGidir oo iyagu dhawaan baaq u diray Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha dalka.
Xubnaha ayaa sheegaya in Ra’isul wasaaraha dalka uu Odayaashaasi kala hadlay shaqsiga ay usoo xusheen in looga dhigo Wasiirka cusub ee u buuxin doona golaha wasiirada, waxaana la sheegayaa inay gudoonsiiyeen Warqad xiran oo lagu soo diyaariyay magaca shaqsiga u matali kara Xukuumada.
Warar hoose waxa ay sheegayaan in warqadaasi uu ku qoran yahay C/kariin Guulleed oo Odayaasha ay dhawaan u aqoonsadeen inuu yahay ruuxa kaliya ay u dhiiban karaan xubinta ay ku leeyihiin Wasiirada.
Odayaasha ayaa waxa ay Ra’isul wasaaraha ku wargaliyeen inuusan ka hor imaan karin rabitaanka Beeshooda, islamarkaana aysan ku qanci doonin inuu la imaado shaqsi kale oo aysan u fasixin iyaga.
Ra’isul wasaare Cumar oo warqadaasi ka gudoomay Beesha ayaa waxaa hadana jira warar hoose oo tibaaxaya in CC uu ka codsaday inay la imaadan Mas’uul kale si hadii looga hor imaado Guulleed lagu buuxiyo xubintaasi.
Siyaasada cusub ee Odayaasha Beesha HabarGidir, ayaa meesha ka saareysa go’aanka BF Somalia oo weli halkiisa taagan, waxaana suuragal ah in Ra’isul wasaaraha dalka uu ka talaabo warqada kaga imaaday dhanka Beesha.
Madaxweyne Xasan ayaa dhankiisa kawada dadaal uu mar kale kusoo laabanaayo C/kariin Xuseen Guulleed, iyadoo iminkana la sheegay in taageero looga raadinaayo dhanka BF.